Isibheno sokuNqunyanyiswa kweAmazon: Izinto eziza kwenziwa emva kokuNqunyanyiswa koMthengisi weAmazon
Inkonzo yezibheno kwiAmazon
Isibheno sokuNqunyanyiswa kweAmazon
Uthintelo lokuNqunyanyiswa koMthengisi weAmazon
Ukuhlolwa kweMpilo kwiAkhawunti
Ukunyusa ukuthengisa kwabathengisi beAmazon
Yenza kunye nezinto ongazenziyo emva kokumiswa kweakhawunti yomthengisi weAmazon
IAmazon kubathengisi abakwi-Intanethi yi-mecca engcwele. Kwaye, kuyafana nakubathengi ngokunjalo. Zininzi iindidi ezahlukeneyo kunye neemveliso umntu anokuzithenga. Nangona, ngamanani anyukayo abathengisi eqongeni ababonelela ngeemveliso ezinkulu, inani lezinto zokumiswa kweAmazon nazo zonyukile.
Oku kwenzeke ngenxa yokuba umgangatho weemveliso eqongeni wehlile kwaye inani labathengi abangonwabanga lenyukile. Ukuqinisekisa ukuba abathengi beAmazon bafumana ezona zinto zibalaseleyo kwi-Intanethi, iAmazon izama ukuba nabathengisi abasemgangathweni. IAmazon ikwenza oku ngokumisela imigaqo-nkqubo ngaphezulu kwabathengisi eqongeni. Kwaye, ukuba ayidlalwanga ngokufanelekileyo ngabo bayayinqumamisa iakhawunti yabo. Yinto eqhelekileyo leyo kwaye siyinkampani enceda abantu abanesidingo.
Nangona, ukuba umtsha kwesi sihloko ndingakucebisa ukuba ufunde apha ngezantsi ngaphezulu ngesibheno sokumiswa kweAmazon, kwaye sibanceda njani abantu abaneeakhawunti zomthengisi ezinqunyanyisiweyo.
Ithetha ntoni ukumiswa kweAkhawunti yeAmazon?
Ngenani elikhulayo, kuye kwakho izehlo ezininzi nangakumbi zokumiswa komthengisi weAmazon. Ngokufanelekileyo, kunokubakho iimeko ezintathu apho umthengisi weAmazon anokufumana khona. Zezi:
Ukumiswa: Ukuba iakhawunti yakho inqunyanyisiwe oko kuthetha ukuba unokwenza iSibheno sokumiswa kweAmazon. Ngokuqinisekileyo oku kuthetha ukuba kuya kufuneka uze nesicwangciso sokwenza.
Yaliwe: Oku kuthetha ukuba umthengisi wenze isibheno sokumiswa kweAmazon kodwa sakhatywa ligunya. Kule meko, umntu kufuneka eze nesiCwangciso sokuSebenza esihlaziyiweyo.
yavalwa: Le yingongoma yokungabuyi. Akukho sibheno sokumiswa esinokukusindisa ukuba iakhawunti yakho ivaliwe.
Ukumiswa kweAmazon kungashwankathelwa kwezi zimbini zokuqala. Ukuba iakhawunti yakho inqunyanyisiwe okanye isibheno sakho saliwe. Kuthetha nje ukuba iAmazon ifuna ukuba wenze utshintsho kunye nokuphucula iinkonzo zakho.
Kodwa, ukuba uthintelwe eqongeni eyiyeyona ndawo imnyama ngoko akukho kubuya. Umntu unokucinga ngokuvula iakhawunti entsha kodwa eneneni iphikisana nemigaqo-nkqubo yeAmazon. Oku kuthetha ukuba akukho ndlela yokwenyani yokufumana iakhawunti yakho. Nangona kunjalo, oku kwenzeka kuphela kwezona zinto zingathandekiyo. Ke, ukuba awazi ngokungafaniyo kulo loop amathuba okuba ungangafiki kweli nqanaba. Kwaye oko kunokulungiswa kusetyenziswa isibheno esisebenzayo sokumiswa kweAmazon.
Esona sizathu siqhelekileyo sokumiswa kweAmazon
Ukuba siqala ukufunda imigaqo kunye neemeko zeAmazon kuya kuthatha ixesha kunye nokudideka okuninzi. IAmazon njengelona qonga likhulu le-ecommerce licela ukulandela imigaqo nemigaqo emininzi. Esi sizathu sokuba inani lokurhoxiswa kweAmazon ngexesha lihambile. Ngapha koko, besikhe sakubona ngokwethu ukunyuka kwenani labantu abasondela kuthi befuna ukunqunyanyiswa eAmazon. Ukuba sihamba ngencwadi yeAmazon emva koko zinokubakho izizathu ezininzi. Kodwa, zonke zinokudityaniswa zibe zintathu:
Esona sizathu siqhelekileyo kukophula imigaqo-nkqubo iAmazon ekucela ukuba uyilandele. Ukuba awuzange usebenze ngokuthe ngqo ngamathuba okuba ungophula imigaqo-nkqubo.
Ishishini lakho lithatha indawo yokuntywila ngokunzulu. IAmazon ayinqweneli ukonwabisa abathengi abathengisa kakubi. Uninzi lwexesha, kukho izizathu ezivakalayo zokuba oku kwenzekayo? Kwaye ukuba uyazi ngayo ke qiniseka ukuba uyayilungisa.
Ukuthengisa imveliso engavumelekanga eqongeni. Oku kunokwenzeka nangeemveliso ezophula imigaqo-nkqubo ye-IP.
Funda kwakhona: Izizathu zokuNqunyanyiswa kweAkhawunti yoMthengisi yeAmazon
Sifumana njani umxholo wokumiswa kweAmazon?
Ngaphandle kokuqhuba iintloko zethu apha naphaya, eyona ndlela yokwenza oko kukujonga isaziso esithunyelwe yiAmazon. Ukuba iakhawunti yakho inqunyanyisiwe okokuqala ubunokuthi ungayihoyi. Kodwa, iAmazon iqinisekisa ukubonisa impazamo yakho kwaye kulapho sizama khona ukunceda.
Ngokudlula kwisaziso esithunyelwe yiAmazon, siqala umsebenzi wethu ukwenza iakhawunti yakho yomthengisi ibe sisibheno esimiselweyo sokumiswa kweAmazon.
Ungakuthintela njani ukumiswa kweakhawunti yomthengisi weAmazon?
Ukubhala isibheno sokumiswa kweAmazon kuyimpikiswano engeyomfuneko xa umntu enokuhlala kude nonqunyanyiso. Siyinkonzo yokubhena yokumiswa kweAmazon kodwa sikwabonelela abathengi bethu ngesibonelelo sokuthintela ukunqunyanyiswa.
Ukufumana iakhawunti yakho imisiwe kwaye uphinde uyibuyise kunokubonakala kuyinto eqhelekileyo. Kodwa, kwenzeka ntoni xa uphulukana neshishini lakho kwezi ntsuku zimbini. Ngapha koko, oku kunokuphazamisa ukuthembeka kwakho kunye nenqanaba lemveliso kwinkqubo. Ngaphandle koko ivenkile yakho okwangoku ivaliwe oko kuthetha ukuba awenzi mali.
Simamela kakhulu imisebenzi yakho eqongeni kwaye sikukhokele. Sizama ukuba ungabanjwa nakweyiphi na imisebenzi enobubi, nokuba usazi okanye ungazi. Ndithembe, abathengi abaninzi baziva ngathi banokuphazamisa kwaye baqeshe umntu ofana nathi. Kodwa, ihlala ingasebenzi ngendlela esifuna ngayo ngakumbi ukuba umthengi ebephinda iimpazamo ezifanayo. Siqinisekisa ukuba awukho mpazamo kwaye ugcine umkhondo ukuze impilo yeakhawunti yomthengisi igcinwe kwaye abathengi baphephe nasiphi na isibheno sokumiswa kweAmazon.
Sisenza njani iSicwangciso sokuSebenza sokumiswa kweAmazon?
Kukho izinto ezimbalwa ekufuneka zenziwe ngokwakho. Umzekelo, ukukhangela isaziso esithunyelwe yiAmazon emva kokunqunyanyiswa. Jonga iimetrikhi zomthengisi ukuze ubone ukuba iakhawunti yakho iqhuba njani ngeli xesha.
Ukuze senze amathuba ethu alungileyo kwaye senze efanelekileyo Isicwangciso sokusebenza (POA), sizama ukuba ngokucokisekileyo kangangoko kunokwenzeka. Kwaye, sizama nokucela uxolo, ligama eliphambili elinokuba namandla ngokwenene.
Ewe, siyenzile le nto amaxesha amaninzi. Thina xa siqonda yonke into esiyinikiweyo, zama ukwenza isicwangciso esisebenzisa ezi zinto ziphambili njengezithako:
Sithathe uxanduva egameni lakho ngayo nayiphi na ilahleko eyenzekileyo. Makube liqonga okanye abathengi okanye bobabini.
Zama ukwenza umfanekiso apho sibenza bazive ukuba kuyabulela ukuba neqonga elifana neAmazon. Kwaye, lithuba lokwenene esingasokukuthanda ukuphazamisa.
Musa ukugxeka ezinye iimveliso zabathengisi okanye iinkonzo zabo. IAmazon iyithatha ngexesha elifanelekileyo kodwa iyamisa nabani na owaphulayo.
Kwaye njengokuba sithe "uxolo" ligama eliphambili.
Ezinye iingcebiso ezibalulekileyo
Oku kunokubonakala ngathi kukukhohlisa kodwa ndithembe ukuba konke kuyinyani ngesidima. IAmazon inikezele ngeqonga kwabaninzi kurhwebo oluthembekileyo. Inika amathuba awoneleyo kwabo banqwenela ukwenza elona shishini labo lihle. Ukukwazi ukuthengisa ngokuthe ngqo kubathengi bakho naphina kuyinto enqwenelekayo. Kwaye ngoku xa iyinyani endaweni yokubulela, abathengisi abaninzi bazama ukuxhaphaza iinjongo zexesha elifutshane.
Ewe, sakuba sihlanganisile yonke idatha ukwakha isibheno esifanelekileyo sokumiswa kweAmazon, asikhawulezi. Kubalulekile ukuba nantoni na ethunyelwa kwiAmazon ikumgangatho ophezulu. Oku kunokubonakala ngathi kuyathandabuza kodwa inyani kukuba ukuba uphose umzamo wakho wokuqala emva koko ukubuyiselwa kwakhona kungathatha ixesha elininzi.
Ezinye izithako ezibalulekileyo esizisebenzisayo ukwakha isibheno esifanelekileyo sokumiswa kweAmazon:
Sizama ukuthetha kuphela ngemigaqo-nkqubo kwaye leliphi ilungelo lethu. Akukho sizathu sokuthetha malunga nokusebenza kweemetriki xa unqunyanyisiwe. Nokuba unikezela ngamanani avuthayo, oko akuthethi nto ngakumbi ukuba inkxalabo yahlukile.
Siqinisekisa ukuba ileta ethunyelwe sithi ayide indalo. Umxholo omde uthatha ixesha ukwetyisa kwaye ke ngoku mfutshane kwaye ucocekile yeyona ndlela ifanelekileyo yokubhala isibheno sokumiswa kweAmazon.
Endaweni yokusebenzisa imihlathi emide yenkcazo, sizama ukumisela isibheno sokunqunyanyiswa kwe-amazon sisebenzisa amanqaku eebhulethi kunye neenombolo. Oku kunokubonakala ngathi yinto encinci kodwa kuyenza eyakho Ileta yesibheno i-amazon indlela yokuskena ngakumbi kwiingcali ezichongiweyo zeAmazon.
Sizama ukunqanda naluphi na ulwazi olongezelelweyo kwaye sigxile kuphela kumcimbi onikezelwe kumthengi. Oku akuqhubeli ingqalelo engeyomfuneko kwenye indawo.
Ukuqala kwethu komsebenzi yingxaki ekhoyo. Endaweni yokudlala nayiphi na imidlalo yokugxeka nabani na, siyaqinisekisa ukuba iAmazon iyazi ukuba siyaluqonda ulwaphulo-mthetho lwethu kwaye siyakulungisa i-ASAP, kwaye singaze siphinde sibuye.
Elinye icebo elihle, esihlala silisebenzisa ukubhala umhlathi wokwazisa uchaza yonke into ngokubaluleka. Oku kunokubonakala ngathi kukuncinci kodwa kuyasebenza njengomlingo. Ezi ngcebiso ziluncedo kakhulu ngelixa usenza isibheno sokumiswa kweAmazon. Kwaye, ubukhulu becala yifomathi esiyidlalayo ngaphakathi kodwa kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kuphela yingxaki ekhoyo eya kuthi ichonge ukuba kuya kujongwana njani nayo.
Kutheni le nto sicebisa abathengisi ukuba baye kubuchwephesha kwisibheno sokumiswa?
Ewe, oku kungavakala kuyinto engaqhelekanga kodwa iimvakalelo zinokuba sesona sizathu sokuba ukubuyiselwa kwakho kungathatha ixesha elide. Sidibana nabathengi mihla le abasebenza ngokunyaniseka eqongeni. Nangona kunjalo, iakhawunti yabo iye yanqunyanyiswa ngenxa yokuba bebengazi okanye bengasebenzi ngokwaneleyo kweli sebe.
Ngapha koko, sinokukuxelela malunga nabathengi abasithinteleyo nje isaziso seAmazon kuba bebeza kuyeka ukuthengisa enye yeemveliso zabo ngenxa yohlolo lomsebenzisi. Nangona ngaphambi kokuba benze nantoni na, iAmazon yamisa iakhawunti yazo.
Baninzi kakhulu abantu eqongeni abanike ixesha elininzi ekwakheni ishishini labo. Ukuyithatha yonke into ngephanyazo kunokuba yinto eninzi kuninzi. Kwaye kubalulekile ukuba uzigcine ubhaliwe. Kwaye, ngaphandle kokuba liqela lakho lokuqala lokuphendula xa unqunyanyisiwe, siyaqinisekisa ukuba awurhoxiswa kwasekuqaleni. Thina @ APlus Global Ecommerce siyakholelwa ukuba singamaqabane nabathengi bethu ngamaxesha emfuno. Ishishini labo eliqhuba kakuhle yimpumelelo yethu.
Iingcebiso zethu zokugqibela zokuphepha ukubhala ukumiswa kweAmazon
Ewe, siyinkonzo kwaye siyathanda ukuba neshishini. Kodwa, oku akuthethi ukuba akufuneki sizame ukunceda abanye abathengisi beAmazon. Sinokuba neentengiso ezahlukeneyo kodwa siyayiqonda ingxaki yakho. Kwaye ngelixa zininzi iinkonzo phaya ngaphandle wonke umntu ucinga ngokunikezela ngokudutyulwa ngokuzama ukwenza isibheno kubo. Zininzi izinto ezinokuthethwa kodwa kuhlala kungcono ukukhusela nakuphi na ukumiswa. Ukwenza njalo kukho izinto ezimbalwa ekufuneka uzigcine engqondweni.
Kuphephe ukuthengisa naluphi na uhlobo lwezinto ezithintelweyo.
Baninzi abathengisi abanokwenza njalo kodwa oko akuthethi ukuba kufanelekile. IAmazon iyalela ngokuthe ngqo abathengisi bayo malunga noku. Ke ngoko kubalulekile ukuba umamele ngononophelo ukuba unqwenela ukunqanda isibheno sokumiswa kweAmazon.
Zama ukunqanda ukuthengisa
iimveliso ezinokubonakala zithandabuza kuwe. Ukuba imveliso oyithengisayo ijongeka njengokulinganisa isixhobo okanye ukusebenza kwayo, zama nje ukwazi iingcambu zale mveliso. Kukho abantu abaninzi abafumana iiakhawunti zabo zinqunyanyisiwe ngenxa yemigaqo-nkqubo yokwaphula umthetho ye-IP. Esi sesinye sezizathu eziphambili zokuba kutheni abathengisi abaninzi beyekisa iiakhawunti zabo.
Ukuqhuba ishishini kuthetha ukuba unokuthengisa ngaphezulu kwemveliso enye. Oku kuthetha ukuba ukuba uziva unqabile malunga nemveliso oyithengisayo kwaye unqwenela ukuyenza ke ukufumana indibano yeyona nto unokuyenza.
Kulumkele ukukopa uphononongo lwakho.
Uphengululo kwiAmazon luphawu oluphambili lomgangatho wemveliso yakho. IAmazon ayifuni ukuba uzame ukuyitshintsha nangayiphi na indlela. Kubalulekile ukuba uthathe olo hlaziyo ngokwakha kwaye uqale ukuphucula inkonzo yakho ngokugcina nje kuzo. Ukuphononongwa kwabathengi yindawo yokuqala apho umntu anokujonga khona ukugxeka nokuncoma ngokunyanisekileyo. Kwaye ukuba uyasilela ukwenza oko emva koko unokwamkela isibheno sokumiswa kweAmazon.
Thembeka kwiinkcazo zakho.
Abathengisi abaninzi bayichaza imveliso yabo ngokwahlukileyo ngelixa eyona mveliso ingeyiyo loo nkcazo. Ukuba iAmazon ifumana izikhalazo zendlela ezininzi malunga nokuya kuthi usamkele Isibheno sokumiswa kweAmazon.
Ukufumana isibheno sokunqunyanyiswa kweAmazon kunokuba sesona sihlandlo sibuhlungu unokufumana. Nangona, ukuba awukwazi ukuyisingatha le meko ngokuqinisekileyo ungasicela ukuba sikuxhase. Ngokweminyaka yobudala, sisengama-nascent kodwa ngokwamava, sinazo ezinye zeengcali zokumiswa kwesibheno ezinamava eAmazon. Abasebenzi bethu banamava anzulu kwi-niche kwaye baneminyaka yamava ebaleni. Ngaphandle kwalonto I-Aplus kwi-Ecommerce yeHlabathi inikeza ezinye iinkonzo njengokuthintela ukunqunyanyiswa, ukuvavanywa kwezempilo kwiakhawunti, ukonyusa intengiso, njl.njl. Siyathemba ukuba oku kunokuba luncedo kuwe. Ndiyabulela ngokuyifunda kude kube sekupheleni.
I-642 N Highland Ave, eLos Angeles,
Singathanda ukuva kuwe!
Okulandelayo Page →
Twitter Instagram I-Facebook-f Youtube
Ukujonga impilo kwiAkhawunti
Ilungelo lokushicilela © 2021 AplusGlobalEcommerce
Thetha nengcali yethu
Molo, ndingakunceda ngantoni?